Iimpawu ezi-9 ezibi kuMenzeli wearhente enokubakho yokuthengisa izindlu-Zimbalwa iimpawu ezimbi
EyeNkanga 20, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
1. Ummeli ucebisa ngexabiso eliphezulu lendlu yakho. Ukuba uthengisa ikhaya lakho, qiniseka ukuba ufumana uluhlu lwenkcazo-ntetho ubuncinci kubameli abathathu. Baza kukuxelela amaxabiso emizi ethelekisekayo, kunye nokuba lithathe ixesha elingakanani ukuthengisa. Kuba bonke bajonga ngedatha enye, uluhlu lwamaxabiso abacebisayo akufuneki lube kude kakhulu kolunye. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba amaxabiso ekhaya aphezulu kakhulu ekuqaleni kuya kuthetha ukuba kuthatha ixesha elide ukuthengisa. Kwakhona, ukuba ikhaya likwindawo yentengiso ixesha elide, kunokwenzeka ukuba abathengi baya kuqala ukuzibuza ukuba yintoni ephosakeleyo ngayo.
2. Ukuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba kukusebenza kwearhente. Ufuna iarhente eya kuba ngokulandela imarike mihla le. Ukuba umntu ukule ntsimi yexeshana kuphela, ingqwalaselo yakhe iya kwahlula-hlulwa.
3. Ummeli unxulumene nawe. Ngaphandle kokuba esi sihlobo sinetarhente yexesha elizeleyo enobuchule kuhlobo lwakho lokuthengisa, ayinakho ukwenza kakuhle kulo msebenzi njengenye iarhente. Akufanele uqeshe umntu ngenxa yokuba unxulumene nawe.
4. Iarhente ayiqhelekanga ngemeko yendawo yokuhlala yommelwane wakho. Kubalulekile ukuba ufumane umntu oyingcaphephe xa kuziwa kumakhaya akummelwane wakho. Iarhente ekhetheke kwindawo ethile inomdla wokunxibelelana nabathengi abafuna ikhaya njengaye nawuphi na umthengisi okanye abathengisi ababeka amakhaya kwimarike apho nawuphi na umthengi anikwe angafumana kufanelekile.
5. Ikhomishini yearhente iphantsi kakhulu. Ambalwa amaarhente aya kuvuma ukubonakalisa ikhaya apho ikhomishini iphantsi. Kwiimeko ezininzi, iikhomishini zahlulahlulwa phakathi kwabathengi nabathengisayo. Kungakulinga ukwehlisa ikhomishini, kodwa oku kungaphelela ekubeni endlwini yakho kuthengiswe ixesha elide. Kunokwenzeka ukunciphisa ikhomishini ukuba iarhente enye iphela ekuluhlu nasekuthengiseni ikhaya lakho.
6. Ufumene iarhente kuluhlu lwe-Intanethi. Nangona iarhente inokuba lukhetho olufanelekileyo, akufuneki ukuba uyithathele ingqalelo njengoko injalo ngenxa yobuso bomntu kuluhlu lwe-Intanethi. Dlan 'iindlebe nommeli ngokwakho ukuze ufumanise ukuba ulungile kangakanani na.
7. Ummeli akaqhelanga ukujongana nodidi lwepropathi yakho. Iziphumo ezizezona zinokwenzeka, ufuna ukuqinisekisa ukuba iarhente iyalwazi uhlobo lwepropathi ebandakanyekayo kwintengiselwano yakho.
8. Umenzeli uqhele ukusebenza nabathengi abangaphandle koluhlu lwamaxabiso akho. Umenzeli oqhele ukuphatha uluhlu olungaphandle koluhlu lwamaxabiso akho unokunganikezeli ingqalelo yakho efanelekileyo.
9. Iarhente ayingqinelani neenkcukacha zentengiselwano okanye ayisiyondaba-thethwano oluhle. Rhoqo, owona msebenzi ubalulekileyo wearhente kukungafumani khaya elinomdla kodwa uqiniseke ukuba intengiselwano ihamba yonke indlela ukuya kuvalwa. Zininzi iinkcukacha ezifuna ingqwalaselo ukuya kuyo yonke inkqubo.
UJodi Bakst, Umrhwebi-ongumnini we Ingcaphephe kwezokuthengisa izindlu, usebenza neqela eliqeqeshekile kakhulu labathengi abomeleleyo kunye nabathengisi abakhonza kwiChapel Hill, eDurham, eCary, Apex naseMorrisville, kuMantla North
Zimbalwa iimpawu ezimbi xa kuziwa kwiiarhente yearhente yezezindlu, kwaye ke zilithoba ekufuneka ungazihoyi ukuba ziza phezulu.
okwenyaniWW Novemba 20, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Eyona Agent yeyona Arhente yokuthengisa izindlu, Umthengisi zindlu, ukuthengisa ikhaya lakho. Bookmark le Permalink.
Matshi 18, 2020 Amanyathelo ama-8 okuthengisa kwiKhaya lakho If you're ready to sell your house but have never gone through the process, you may not be sure where to begin - these eight steps will help ensure success. Find Out How Much Your Home is Worth The first step is to ask, "How much is my house worth?" If the answer isn't what you hoped, do what you can to increase the value by making improvements. If your budget is tight, at minimum consider repainting, beautifying your landscaping, eliminating clutter and giving it a thorough […] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Oktobha 31, 2016 Iingcebiso ezine eziGqibeleleyo zokuThengisa Ikhaya lakho Ngexesha leHolide Ukuzama ukuthengisa ikhaya lakho ngexesha leholide kunokubonakala ngathi yinto yobusuku. Uya kuba ujongene nabantu abancinci kwimali, bacinezelwe ixesha, kwaye bafuna ukugqibelela. Nangona kunjalo, ukuba ulandela ezi ngcebiso zilula, ikhaya lakho liya kuthengisa ngokuncinci ngeli xesha lokuhamba. Yenza ikhaya lakho libe yindawo efudumeleyo Phambi kokuba abathengi abanokubakho beze ekhayeni lakho, sebenza nzima ukuyenza ifudumele-ngokoqobo. Vala amakhethini akho ebusuku ukuze ubambe ubushushu, gubungela iindonga zakho […] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Agasti 19, 2016 Iimbono ezili-10 zokuThintela ukuHamba kweKhaya eziNceda ukuThengisa ikhaya lakho ngokukhawuleza ngeeDola eziPhezulu Ukuma ngekhaya lakho yenye yeendlela ezifanelekileyo onokuthi ngazo wenze ikhaya lakho libe nomtsalane ngakumbi kubathengi abanokubakho. Ukuchwechwa ngokuchanekileyo akuyi kukunceda kuphela ekuthengiseni ikhaya lakho ngokukhawuleza, kodwa kuya kukunceda ekufumaneni ixabiso eliphezulu kwekhaya lakho. Kodwa, ingxaki kukuba abaninimzi abaninzi abanalo ulwazi olufunekayo lokuqonga indlu yabo ngendlela efanelekileyo kwaye ngenxa yoko, bajamelana neengxaki zokufumana abathengi kunye nokufumana iidola zekhaya elinqwenelayo. Nangona kunjalo, ukuba umtsha […] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba